China Fire ingubo ifektri abakhiqizi | Weicheng
(1) 1 m * 1 m (2) 1.2 m * 1.2 m (3) 1.5 m * 1.5 m (4) 1 m * 1.8 m (5) 2 m * 2 m. Izincazelo ezimbili zangaphambili zikulungele ukucisha imithombo emincane yomlilo, futhi ukucaciswa kokugcina kufanelekile ukucisha imithombo emikhulu yomlilo nokugoqa abantu ukuze babaleke. Yonke imikhiqizo igcwele ibhokisi lepulasitiki elibomvu lokulwa nomlilo noma isikhwama sendwangu ebomvu ukuthola ukufinyelela okulula.
Esigabeni sokuqala somlilo, ingubo yomlilo imbozwe ngqo ngomthombo womlilo, futhi umthombo womlilo ungacishwa ngesikhathi esifushane.
1. Uma kwenzeka umlilo, ingubo yokuphunyuka emlilweni imbozwe emzimbeni noma emzimbeni wento ezotakulwa, ukuze ubaleke ngokushesha emlilweni, okunikeza usizo oluhle lokuzisiza noma ukukhipha okuphephile kwesixuku . Uma kunengozi yangempela yomlilo, ungagqoka ingubo yokucisha umlilo, enganciphisa kakhulu ingozi yokusha.
2. Ithuluzi lokuqala lokuqala lokucisha umlilo lamabhizinisi, izinxanxathela zezitolo, imikhumbi, izimoto nezakhiwo zomphakathi.
Ingubo yokucisha umlilo iyindlela yokwelapha ekhethekile yendwangu yengilazi ye-twill, enezici ezibushelelezi, ezithambile, ezihlangene nezinye. Ingakwazi ukuhlukanisa ngempumelelo umthombo wokushisa bese isonga izinto ezingalingani kalula. Ingubo yokucisha umlilo ingasetshenziswa kaningi ngaphandle kokulimala.
Ubuhle bengubo yomlilo yilena: 1. Asikho isikhathi sokwehluleka; 2. Akukho kungcoliswa kwesibili; 3. Izinto zokuvala umoya nokumelana nokushisa okuphezulu; 4. Kulula ukuthwala. Ngenxa yokuthi ingubo yokucisha umlilo iyinsiza ethambile yokulwa nomlilo, ingacisha umlilo ngeoksijini ngejubane elisheshayo, ilawule ukusabalala kwenhlekelele, futhi ingasetshenziswa njengezindatshana zokuvikela ukuphunyuka ngesikhathi esifanele, ngakho ingubo yomlilo imishini ebalulekile yemishini yokulwa nomlilo.
Langaphambilini Isithiyo somlilo
Olandelayo: I-sealant engangenisi mlilo